10 Iningi Lemithombo Ehle EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Iningi Lemithombo Ehle EYurophu
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 01/01/2021)
Kunezimpawu eziningi ezinhle nezindawo ezinhle eYurophu. Ngemuva kwawo wonke amakhona, kunetshe lesikhumbuzo noma ingadi ongayihambela. Enye yezinto ezijabulisa kakhulu neziphawuleka kakhulu ngumthombo omuhle kakhulu, futhi sikhethe ngesandla 10 emithonjeni enhle kakhulu eYurophu.
Okomculo, okubabazayo, Imithombo yaseYurophu iyamangalisa. Ukusuka eParis kuya eBudapest, enkabeni yedolobha noma esiqhingini, lezi 10 imithombo emangalisayo ikufanele ngokuphelele ukuvakashelwa.
1. Umthombo WeTrevi ERoma
Umthombo omkhulu futhi odume kakhulu eRoma ngumthombo waseTrevi. Lo mthombo omuhle uchitha 2,824,800 cubic feet of water nsuku zonke. Futhi, ngezikhathi zamaRoma kwakuwumthombo wamanzi ophakathi nendawo. Ngakho, uzobona ukuthi umthombo waseTrevi osezimpambanweni zemigwaqo emithathu "iTre Vie" imithombo emithathu yomthombo.
Uma kwenzeka ungazi, umthombo waseTrevi ungenye yezimangaliso eziyisikhombisa zaseYurophu. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi umthombo omuhle kakhulu eYurophu ubonise ama-movie amaningi, njenge Iholide lamaRoma.
Uphi Umthombo WaseTrevi ERoma?
Umthombo ophefumulayo weTrevi ukumane uhambe imizuzu eyi-10 ukusuka eSpanish Steps. Ungathatha futhi ithilamu uye esiteshini iBarberini.
IMilan iya eRoma Izintengo Zokuqeqesha
Amanani entengo e-Florence to Rome
I-Pisa eya eRoma Izintengo Zokuqeqesha
Amanani eNaples aya eRoma
2. Umthombo weTrocadero
Isici esiphawuleka kakhulu somthombo weTrocadero ngumthombo waseWarsaw enkabeni. Imise okomcengezi, nge 12 imithombo eyayizungezile. Ngakho-ke, Isimo se-Eiffel Tower nomthombo kuyinto enhle kakhulu.
I izingadi ezinhle futhi imithombo ekuqaleni yayiyingxenye yeTrocadero Palais, zadalwa ku 1878 ngokuchazwa kwendawo yonke. Ebheke emfuleni iSeine, ngemuva iPalais du Chaillot nangaphambili kwe-Eiffel Tower, umthombo weTrocadero yi- indawo epikinikini ephelele eParis, naseYurophu.
Ungafika Kanjani eTrocadero?
Ungafika Ezingadini ZaseTrocadero nasemthonjeni ngemetro, esiteshini iTrocadero.
3. Umthombo waseLatona eVersailles
Bangu 55 imithombo ezingadini ze Versailles, kodwa enhle kakhulu futhi ephawulekayo ngumthombo waseLatona. Umthombo waseLa Latona waphefumulelwa yi-Ovid's Metamorphoses, Umama waseLatona ka-Appollo noDiana, oboniswe nezingane zakhe kulo mthombo okhazimulayo.
Ukubhekana Nomsele Omkhulu, ungabona kalula futhi uthande umbono weKing Louis XIV kusuka noma yikuphi eVersailles. Ngenkathi ephakeme ungajabulela umbukiso womculo wasemthonjeni owenzekayo 3 izikhathi ngesonto.
Ungafika Kanjani eLatona?
Isigodlo saseVersailles siseVersailles town, nje 45 imizuzu ngesitimela ukusuka eParis. Ungathatha isitimela uye esiteshini iVersailles Chateau Rive Gauche. Bese kuba ukuhamba ibangana nje kusuka esiteshini uye esigodlweni nasezivandeni.
La Rochelle kuya eNantes Izintengo Zokuqeqesha
Toulouse to La Rochelle Izintengo Zesitimela
IBordeaux iya eLa Rochelle Amanani Esitimela
IParis eya eLa Rochelle Amanani Esitimela
4. Umthombo we-Efteling
Umbukiso womthombo womculo ohlaba umxhwele kakhulu eYurophu ngumbukiso womthombo womculo epaki yetimu ye-Efteling. Uzomangala nge 12 ukukhanya kwemizuzu nombukiso wamanzi, lapho amaxoxo aguqula amanzi abe ngumbukiso omuhle we-ballet.
Uhlelo lomthombo wase-Aqunura lwakhiwe i-Efteling 60 isikhumbuzo. ukuze uphethe, umbukiso womculo ukuphela okuhle kohambo lomndeni oluya kokumangalisayo Ipaki yetimu ye-Efteling.
Ungafika Kanjani Emthonjeni We-Efteling?
Leli paki elimangalisayo lisekude ngehora ukusuka e-Amsterdam, ngakho-ke ilungele umndeni omnandi uhambo losuku ukusuka e-Amsterdam.
5. 1o Imithombo Enhle Kunazo Zonke EYurophu: Umthombo WaseTrafalgar
AmaMermaids namaTriton yizithombe ezisenkabeni yomthombo waseTrafalgar Square. Nokho, ngokungafani neminye imithombo, ayikho inganekwane ngemuva kokukhetha kwalezi zilwane zasolwandle. Umthombo omuhle kakhulu eLondon ekuqaleni wawakhiwe ngaphakathi 1841 ukunciphisa isikhala sababhikishi.
Uzothola umthombo weTrafalgar Square phambi kweNational Gallery eLondon. Ngaphezu kwalokho, kufanele wazi ukuthi kulapho iLondon ifika khona ukuzijabulisa ngoKhisimusi. Ngakho, uzoba nesinye isizathu esihle sokuvakashela omunye wemithombo emihle kakhulu eYurophu.
Ungafika Kanjani Emthonjeni WeTrafalgar eLondon?
Ungahambela esiteshini sethubhu iCharing Cross kusuka kunoma iyiphi indawo eLondon.
Amanani e-Amsterdam To London Train
Amanani entengo eParis aya eLondon
Amanani eBerlin aya eLondon
Amanani eBrussels aya eLondon
6. Umthombo waseSwarovski E-Innsbruck
Isifunda iTyrol singesinye sezifunda ezinhle kakhulu e-Austria, kanye nekhaya lasendlunkulu yaseSvarovski. Umthombo waseSwarovski utholakala eSwarovski Crystal Worlds, okuyinkimbinkimbi yokuzijabulisa nokudla. Empeleni yayenzelwe umkhiqizi wengilazi ye-crystal, I-Swarovski.
Umthombo wakheke njengekhanda lendoda. Ingenye yemithombo engavamile kakhulu eYurophu, futhi nakanjani kufanele ukuvakashelwa lapho uhamba izintaba e-Austria.
Ungafika Kanjani Ku- Umthombo waseSwarovski Ngo Innsbruck?
Ungakwazi travel ngesitimela ukusuka e-Innsbruck kuya eSwarovski esikhathini esingaphansi kwehora.
EMunich kuya ku-Innsbruck Amanani Esitimela
I-Salzburg kuya ku-Innsbruck Amanani Wokuqeqesha
I-Oberstdorf iya ku-Innsbruck Amanani Esitimela
I-Graz iye ku-Innsbruck Amanani Esitimela
7. UJet Deau EGeneva
Indiza yamanzi, indiza yamanzi in English, ngumthombo omude kunayo yonke eYurophu futhi ungafinyelela 400 amamitha. ekuqaleni, umthombo wakhiwe ukulawula ingcindezi eyeqile yesitshalo se-hydraulic eLa Coulouvreniere, kodwa kungekudala waba uphawu lwamandla.
Ngakho-ke, kunzima impela ukukhumbula uJet Deau lapho uvakashela eGeneva. Empeleni, ungathola indlela eya eLake Geneva, uma umane ulandela indiza yamanzi.
Amanani entengo yaseLyon eya eGeneva
IZurich kuya eGeneva Izintengo Zesitimela
Amanani entengo eParis aya eGeneva
UBern waya eGeneva Izintengo Zesitimela
8. Umthombo waseStravinsky, Paris
Umthombo waseStravinsky eCentre Pompidou uyindumiso yomculo kumqambi waseRussia, U-Igor Stravinsky. Izindebe ezinemibala egqamile, umhlekisi, neminye imifanekiso ebabazekayo yenza lo mthombo wamanzi ungomunye wemithombo engavamile kakhulu eYurophu. Idizayini yenziwe ngumqophi uJean Tinguely nomdwebi uNiki de Saint Phalle. Bobabili abaculi banezitayela ezihluke kakhulu: imboni yamaDadaist ngakolunye uhlangothi, futhi kukhanye ngakolunye uhlangothi. Ngakho, ndawonye, umsebenzi wabo ugubha umculo omuhle kakhulu wesimanje wekhulu lama-20.
Akungabazeki, umthombo waseStravinsky uzobamba ukunaka kwakho lapho uwuthanda kakhulu. Empeleni kufana nokubona umdlalo wamasekisi emnyango wesikhungo esidume umhlaba wonke iPompidou.
Ngifika Kanjani Ku- Umthombo waseStravinsky?
UFontaine Stravinsky usemnyango wesikhungo sasePompidou. Ungathatha iMetro uye esiteshini seHotel de Ville.
Amanani entengo eParis aya eMarseilles
IMarseilles eParis Izintengo Zesitimela
IMarseilles iye eClermont Ferrand Izintengo Zesitimela
9. Umthombo Womculo waseMargaret Island eBudapest
Umthombo omkhulu kunayo yonke eHungary ukhombisa umbukiso omuhle womculo nowe-laser njalo ngehora. Kwangathi kuze kube ngu-Okthoba, yisikhathi esihle sokuvakashela isiQhingi saseMargaret eBudapest. Ungajabulela ipikinikini ngenkathi ubuka umbukiso wamanzi namalambu amangalisayo.
Esinye isici esenza umthombo weKrizikova ube omunye we 10 imithombo enhle kunazo zonke eYurophu, wukuthi kunohlelo lombukiso womculo wezingane nabantu abadala.
Ngifika Kanjani Ku- Umthombo waseMargaret Island?
Ungafika emthonjeni weMargaret Island kusuka enkabeni yedolobha iBudapest nge-tram.
IVienna iye eBudapest Amanani Esitimela
Prague ukuze Budapest zemininingwane Amanani
EMunich kuya eBudapest Amanani Esitimela
Izintengo zeGraz ziye eBudapest
10. Umthombo WaseKrizik EPrague
Umthombo wokudansa, Umthombo weKrizik, itholakala eduze nendawo yemibukiso yasePrague. Ukuqala kusuka ku- 8 pm kuya phakathi kwamabili, uzokwazi ukujabulela izibani ezihamba phambili nomculo ohamba phambili. Bangu 4 ikhombisa lapho ngamunye ehluke ngokuphelele komunye kumculo namalambu.
Umthombo womculo waseKrizik wakhiwa ngaphakathi 1891 yesikhungo sombukiso. Bekulokhu kujabulisa izixuku kusukela lapho. Ubusuku ngombukiso buzoba yisiphetho esihle sosuku oluhle ePrague.
Ngifika kanjani e Krizik?
Ungafika kalula emthonjeni waseKrizik ngethilamu ukuya esiteshini iVystaviste.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uthole amathikithi esitimela ashibhe kunoma iyiphi imithombo emihle eYurophu.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Imithombo eyi-10 Enhle Kunazo Zonke EYurophu”Kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-fountains-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni se-tr uye ku-pl noma ku-nl nezilimi eziningi ozikhethayo.
Amageza Amahle I-EuropeTraveling Imithombo ImithomboInEurope I-MusicalFountain Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi
5 Iningi Ebukekayo Hidden Gems EBelgium
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izikhangibavakashi Europe